Si dhib yar oo Guul leh oo Khudaarta loo beerto: Sidee loo Iibiyaa Dagalkaaga: Habka Suuq Geynta (Simple and Successful Vegetable Farming: How to Sell Your Crops: Marketing--Somali)
How to Sell Your Crops: Marketing (Soomaali)
printer-friendly PDF version (303 K)
Haddii aad beeraley cusub tahey ama aanad beer weyn laheyn, waxa haboon in aad dagalkaaga si toos ah uga iibiso macmiilkaaga. Tan waxa la yidhaa Toos suuq geyn ah. Sida runta ah lacag badan iyo waliba adigoo wixii hore lagaaga iibsado, laakiin waxad u bahaneysaa wakhti badan ood ku iibiso. Waa si wanaagsan haddii aad qorshe wacan leedahey, aad wakhti badan hayso, ama aad jeceshahey in aad dadka la kulanto lana sheekeysato. Sidee ugu Haboon ee loo Go'aansado Baayacaada Suuqa Iibinta
Macmiilka soo joogsada mafrashku wuxuu jecel yahey geedo midabyo badan leh, beero, xayawaan, iyo alaabta beerta lagu falo oo nadiif ah. Waxey jecel yihiin dagalkaaga oo baxaya in ay arkaan. Haddii uu mafrashkaagu u dhowyahey beertaada iska hubi in ay beertu si wanaagasan u dhowrantahey. Haddii aad rabto in aad dagalkaaga ku iibiso wadooyinka agtooda:
Haddii aad rabto in aad sidan u iibiso dagalkaaga, marka hore soo wac Xafiiska Fidista Hawlaha dagaanka ee Jamicada Minnesota, haddii ay jiraan sharciyo ku saabsan. Waxa laga yabaa in ay macmiilkaagu u baahdan musqulo iyo meelo lagu dhaqdo gacmaha. Taasi waa haddii aad daglkaaga u iibsid sida kor ku xusan. Wakhti baad u baahan in aad tusdo dadka sida dagalka loo daryeelo, ka bacdi fiirso sida ay u shaqeyso. Bulsho Caawisa Habka Beerofalashada ah (CSA)